Warbixin: Dhallinyarada hbtq ma helaan taageero u dhiganta dhiggooda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Michael Reichel / Scanpix.
Warbixin: Dhallinyarada hbtq ma helaan taageero u dhiganta dhiggooda
Dhibaatooyinka dhallin-yarada hbtq-ga maaha kuwo la garan-san yahay
La daabacay onsdag 24 juli 2013 kl 12.35
Qorshe socon doona muddo saddex sannadood ah looguna talo galay sidii loogu siin lahaa dhallin-yarada waxa lagu magacaabo hbtq oo ey la soo gudboonaadaan falalka sharaf-dhaca iyo inaaney helin taageero la mid ah kuwa dhiggooda ee u galmooda jinsiga ka duwan oo uu bilaabay ururka u dooda xuquuqda sinnaanta galmada ee dhallin-yarada ee RFSL ayaa lagu sheegay in dhallin-yaradaasi u baahan yihiin taageero ka ballaaran midda ey iminka helaan:
– War-bixinta ayuu ku jiraa tusaale ahaan qof dhallin-yaro ah oo lagu yiri " waa inaad fahantaa inay dhibaato waalidkaa ku noqoneeyso inaad tahay ruux hbtq ah ". Iyo in ruuxaa uu iskuulka ka sii caawiyo inuu dagaalka iyo kontoroolka qaxarka halkaa ka sii wado. Markaa in ruuxaasi helo taageero sida tusaale ahaan guri uu keli ku deggan yahay oo aanay cid kale ogeeyn, haddii uu weliba wiil yahay waa mid aad u adag, sida ay sheegtay Emelie Mire Åsell, ahna hogaamiyaha laanta dhallin-yarada ee ururka RFSL.
Laanta dhallin-yarada RFSL ayaa muddo saddex sannadood ah ku hoowlanaa qorshe la xiriira sharaf-dhaca iyo dhallin-yarada hbtq-ga. Iyada oo hoowlaha ey qabtaan ey ka mid yihiin dhanka aqoon kororsiga iyo iyo abuurtitaanka bogga internet-ka ee hbtheder.se, halkaasina oo ey ka heli karaan la kulanka ama xiriir la sameeynta dhallin-yaro ku sugan xaalad la mid ah kuwooda ey la reerayowga hbtq-ga ah oo ey reerayoowgooda kala soo gudboonaadaan cadaadis dul kala socod ah, hanjabaad iyo dil.
Sidoo kale waxaa qorshahan lagu soo ban-dhigay xaaladdaha la soo gudboonaada dhallin-yarada hbtq-ga ah oo ey la soo gudboonaadaan dembiyada sharf-dhaca, waxa afkan iswiidhishka lagu yiraahdo ”heder” oo laga heley waayo-arag-nimada ay laanta dhallin-yarada ee ururka rsfl kala kulantay dhallin-yaradaa, sida ay sheegtay Emelie Mire Åsell:
– Waxaa halkaa nooga muuqday dhibaatooyin u dhigma. In jir-dilka iyo kontoroolka lagu hayo dhallin-yaradaasi yihiin kuwo la mid ah kuwa ey qabaan xitaa dhallin-yarada aan hbtq-ga aheyn ee dhibaatada ilaalinta sharaftu kala soo la soo gudboonaato. Hase yeeshee ey jiraan xaalado u gaar ah dhallin-yarada hbtq-ga ah iyo iney kaga adag tahay sidii ey taageero ku heli lahaayeen, marka loo barbar-dhigo kuwooda aan ahayn hbtq. Tusaale ahaan in la isku dayo sidii loo bedeli lahaa iyo iney kaga adag tahay sidii ey ku heli lahaayeen taageero loo fidiyo. Waxaa laga yaabaa in ruuxaasi uu taageero ka doonto macallinkiisa/macallimmadiisa oo halkii laga oran lahaa ”waa wax cad in aan ku caawinno sida dhiggooda, lagu yiraahdo: sideen wax kuula qaban karnaa?” – marka looma qaabilo dhallin-yarada hbtq-ga si waadix ah.
Alán Ali wuxuu ka howl-galaa barnaamij laga fuliyo ururka Fryshuset oo la xiriira sidii looga hor-tegi lahaa cadaadiska ku saleey-san sharaf-dhaca iyo jir-dilka, qaasatan qorshe loogu magac-daroSharaf hjältar & Sharaf hjältinnor – geesiyada sharafta. Isaga qudhiisa ayaa ka markhaati ah iney jiraan fikirro ah in dhallin-yarada lagula kaco falalka sharaf-dhaca ey yihiin kuwa galmadoodu tahay midda jinsiyada kala duwan hetrosexuell-ka waxa afkan lagu yiraahdo. Waa wiilka iyo gabadha isu galmooda:
- Inta badan waa dhankaa habka loogu hoowl-galo falalka sharaf-dhaca la xiriira. Waa wax aan inta badan dhicin in lagu fekero iney la soo gudboonaadaan dadyoowga isku sinjiga ah ee isu galmooda, homosexuall-ka waxa loo yaqaanno, ama wiil leh oogo wiil, hase yeeshee aquluubta ka dareemaya inuu gabar yahay iyo wixii la mid ah. Waa hoowlo aan culuun ballaaran loo lahayn xaqiiqdii, waana dadyoow meesha ka baxa oo aan su’aallo ku haboon la weydiin.